KHASAARADAHA POLTAVA SILVER (SILVER SOV): SHARAXAAD TARAN, SAWIR, TARBIIL IYO DAYACTIR, DARYEEL IYO QUUDINTA - XOOLAHA
In bakaylaha ee Poltava xayawaanka silver, dhogorta tayo wanaagsan iyo maqaarka waa la isku daraa, taas oo ka dhigaysa shey qiimo leh xoolo yar yar.
Xayawaankan quruxda badani wuxuu u qalmaa meel sare oo ka mid ah xayiraadda taranka ee bakeylka.
Tani waa mid aan la jaahwareerin karin cid kale, maaddaama uu jaakad ka mid ah midabka caadiga ah ee sigaarka caadiga ah uu caadi ahaan u yahay wakiilka noocan ah. In kasta oo, sababo badan oo magacyo kala duwan ah, jahawareerka ayaa laga yaabaa inay soo baxaan qeexida noocyada. "Poltavan" waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Silver Sovet', lacag ah, lacag ah.
Ma taqaanaa? Dhoobada ee bakaylka Poltava ee xayawaanka Silver waxaa la yiraahdaa dib u soo celin, kiiskan waxaa laga turjumi karaa Ingiriis marka loo eego cayaaraha isboortiga - "180 °". Halkan waxaan ku fekereynaa tayada timaha si ay u leeyihiin hooskii iftiin ee saldhigga oo si weyn u madoobaado ilaa dhamaadka.
Xayawaanka ku jira dhogorta lacagta ayaa laga helay da'da Dhexe ee Hindiya, waxaana loo keenay Yurub iyadoo u marineysa Navigators, halkaas oo Faransiisku ay jecel yihiin ugu badan, kuwaas oo loo marayo xulasho mudo dheer ah oo ay soo saareen Champagne. Cilmi-baaristayaasha Soofiyeeti ayaa bilaabay inay la shaqeeyaan noocyada noocan ah hal mar laba xanaaneed - "Petrovsky" (gobolka Poltava, Ukrain SSR) iyo "Fur" (gobolka Tula, RSFSR). Waxay ahayd dadka reer Poltava ee 1952 kuwaas oo awooday inay abuuraan dhar qurxoon, hilib dhadhan fiican leh oo u adkaysta xaaladaha cimilada qabow.
Wakiilo ka tirsan Silver Poltava waxay sameeyeen murqo. Xayawaankani waa mid aad u weyn, taas oo kala soocaysa noocyo lamid ah oo ay jilaan kuwa kale.
Soo dhawow wakiillada ugu wanaagsan ee hilibka, hoosta iyo dhogorta, iyo sidoo kale noocyada farshaxanka ah ee bakaylaha.
Halkan waxaa ah sifooyinka ugu muhiimsan ee Dahabiga ah:
Body in ka badan oo ka mid ah jilayaasha yurub ee Yurub, musqulo, isku dhafan.
Midab dhalashada cusub, bakaylaha caruura madow, iyo bisha 4aad bilawga inay soo iibsato midabkiisa lacag ee "shirkad". Marka koraan, midabka furuhu wuxuu u muuqdaa mid aad iyo aad u iftiin leh, oo siinaya xayawaan "timo sharaf leh".
Madaxa wuxuu leeyahay qaab muuqaal ah, taas, mar kale, kuma raacsanayn cufanka gaaban ee isku dhafka yurub.
Qulqulka dhexdhexaad ah jirka oo si fiican u qalantaa.
Qashinka Musqulaha, sida caadiga ah ayaa la horumariyaa.
Chest Dhismaha dhexe, iyo qaybta danbe ee jirridda dillaacday;
Back toosan, wadaagaan oo dhan.
Aragga soo jiidashada ee xayawaanku wuxuu ku xiran yahay qaangaadhka deg dega ah, waxqabadka sare iyo dhadhanka hilibka. Dhamaan arimahaani waxay isu keenaan mid aad u qiimo badan.
Tilmaamaha wax soo saarku waa sida soo socota:
miisaanka qof weyn ee bakayle waa qiyaastii 6 kg;
dhererka jidhku wuxuu kudhowaad yahay 55 cm, mararka qaarkood ilaa 60 cm;
Da'da lagu taliyey ee da'doodu tahay 3-4 bilood, marka qofku gaaro tiro culus oo ah 1.5-2 kg, maaddaama quudinta sii socotaa uu noqdo mid dhaqaale ahaan aan waxtar lahayn, oo marka lagu daro da'daas, hilibka ayaa leh dhadhan aad u jilicsan;
wax soo saarka hilibka ee 3-4 bilood jirku wuxuu u dhexeeyaa min 55 illaa 65% miisaanka jirka;
Qiyaastii soo saarayaasha wax soo saarka ah waxay dhacaan qiyaastii hal bil kadib maskax ahaan (laga bilaabo 28 ilaa 33 maalmood) - miisaanku wuxuu keenaa qashin ah 8-9, mararka qaarkoodna 12 carruur ah.
Isagoo ka hadlaya lacag Poltava ah, waxaa haboon in la tilmaamo kaliya faa'iidooyinka of this caleen marka loo barbar dhigo bakaylaha kale. Ma kaftan, in maqaarkiisu uu ku dhow yahay isla heerka tayada iyo midabka leh chinchilla, halka ay leedahay aag ballaaran. Calaamadaha noocan oo kale ah ayaa aad u qiimeeya soo saarayaasha muraayadaha dhogorta leh.
Akhri wakiilo kale oo ka mid ah noocyada hilibka bakaylaha iyo tilmaamaha maqaarka: Rex iyo Viennese buluug.
Waxaa jira ficil ahaan aan loo baahnayn tan "Muwaadin Poltava", laakiin waxaa jira faa'iidooyin badan:
maskax dheellitiran iyo ficil la'aanta;
halkii baaxad weyn;
caabbinta barafowga iyo suurtagalnimada in lagu hayo dhismayaal aan kuleylayn;
aan qabyo ahayn cuntada;
Hilib dhadhan leh, hilib casiir leh oo midab leh;
helitaanka habraaca maalinlaha ah iyo adeegayaasha;
dhererka, quruxda badan iyo dhogorta tayo sare leh.
Dhibaatooyinka ka mid ah, mid ayaa ka bixi karta xaqiiqda ah in xayawaanka ay adag tahay in lagu dulqaado kulaylka iyo qoyaan badan.
Shakhsiyaadka ka mid ah Poltava ee xayawaanku waa gebi ahaan aan qabin xaaladaha xabsigga ah iyo la qaboojiyay xilliga jiilaalka adag. Intaa waxaa dheer, jiilaalka qaboobaha wuxuu siinayaa maqaarkooda qurux gaar ah.
Waa muhiim! Dareemaha xasiloonida ah ee noocaan ah wuxuu suurtogal u yahay inuu ku sii hayo sida xayawaanka xaaladaha guryaha. Si kastaba ha noqotee, diirada hiddo-u-dhalashada ee ku saabsan dhalmada ayaa ka dhigi doonta kiiskan xaflad farxad leh marka loo eego xayawaan aan waxba ka jirin isticmaalka dareenka ee dabeecadda lagu qeexay.
Xulashada iyo habeynta unugyada
Xayawaanku ma ahan mid u dhow, xayawaanku wuxuu ubaahanyahay xoriyad si uu u muujiyo dhaqdhaqaaqa (ugu yaraan 250 mm oo u dhaxeeya deriska) - si xor ah u dhaqdhaqaaqa ilaha korontada, si uu u fidiyo addimada. Dhamaanba kuwa ugu fiican ee ujeeddooyinkan waa cagaha ku haboon, kuwaas oo ah laba qaab oo dhismo ah oo leh labada dhinac. Meelaha dariiqa lagu maro waa in ay leeyihiin haan si ay u ilaaliyaan xayawaanka roobka iyo raajadaha qorraxda. Xaaladaha heerkulka ee wakiilada caleemaha waa inay ahaadaan kuwo qabow 17-23 ° C. Xayawaankani waxay u dulqaadan karaan sida caadiga ah, laakiin inta lagu jiro kuleylku waxay noqdaan kuwo aan cidhiidhi ahayn oo isku dayaan inay ku dhuuntaan hooska baqashadooda ama guryahooda. Qoyaanku wuxuu sidoo kale si xun u saameeyaa caafimaadka "Poltavtsy", sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad la socoto xaalada qashinka oo aad u bedesho waqtiga. Beddelida qashinka sidoo kale waxay muhiim u tahay nadiifinta xajinta soo ururinta, halkaa oo laga yaabo inuu ku dul-socdo. Qorraxda tooska ah waa mid aan loo baahnayn xayawaanka aan horay u dulqaadan kuleylka.
Ogow nooca baqashada ee bakaylaha iyo taas oo ka wanaagsan in la doorto. Waxa kale oo aanu soo jeedinaynaa in aad adigu iskaa wax u qabato talooyinka tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay sameynta qafis bakayl ah adoo isticmaalaya habka Zolotukhin.
Tayada, qoyaan iyo xawaaraha dhaqdhaqaaqa hawada (dabaysha, qaboojiyaha) waxay saameyn weyn ku leeyihiin caafimaadka bakteeriyada. Waxay si deg deg ah u neefsatey oo u dhaaftay nidaamkeeda neef-mareenka qadar badan oo hawo qoyan ama walxo waxyeelo leh oo lagu qasi karo walaxda la neefsado. Sidaa darteed, qolka unugyada ku yaala, wareegga hawada qalalan iyo maqnaashaha waa in la hubiyaa (bakaylaha waxay qabtaan qabow). Cabbirka unugyada xajmiga ee dhinaca hore ee qafiska ayaa lagu go'aamiyey sababo amniga, sidaa daraadeed in bakteeriyadu aysan waxyeello u geysaneynin xajmiga iyo xagjirnimada - xajmiga oo leh 2.5 x 2.5 cm oo leh dhumuc dhidid ah 1.8 ilaa 2.5 mm inta badan ayaa la isticmaalaa. Bustaha cabitaanka waa in ay joogaan qafiska (xitaa haddii qaabka la hagaajiyay - tusaale ahaan, laga soo bilaabo dhalo beer balaastig ah oo weyn) iyo helitaanka shakhsi quudin shakhsiyeed ama guud ee quudinta - taas oo ku xidhan meesha ay ku yaalaan unugyada.
Akhri ku saabsan samaynta cunnida bakayle ee gacmahaaga.
Sameynta shuruucda fudud ee nadaafadda ayaa ka caawinaysa bakaylaha inay caadi noqdaan ayna dareemaan raaxo. Qiyaastii hal mar asbuucii waa lagama maarmaan in la sameeyo nadiifinta iyo jeermiska xiga ee unugyada. Qashin baa lagu beddelaa marka uu sumoobay, iyo, ugu muhiimsan, qoyaanka - sida kor ku xusan, xayawaanku uma dulqaadan qoyaan xad dhaaf ah.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ku darto biyo cusub mar walba (ama gabi ahaanba baddel boodhka biyaha), ka saar raashinka cuntada aan la cunin, xayawaanka xayawaanka, cadeeyaa walwalkooda, iyo ka saaraan sababaha waqtigooda. Xayawaan cusub oo dhawaan la yimid waa inuu ku jiraa karantiil ahaan ugu yaraan 14 maalmood si uu u dhammeeyo muddada dhalashada ee cudurrada faafa ee suurtogalka ah. Saddexda maalmood ee ugu horreeya ee bakaylaha waxaa lagu dhejiyaa antibiotics. Haddii cudurku ka shakiyo, xayawaan kasta wuu soo degi doonaa waxaana si gooni ah loogu hayn doonaa kormeer dhow.
Sida habboon, bakaylaha Poltava lacag waa in ay hoos tagto kormeer joogto ah ee xoolaha - waa taranka qaali ah labada dhogorta iyo warshadaha cuntada, iyo for taranta. Cudurada ugu waaweyn waa cudurka myxomatosis iyo cudurada hemorrhagic, talaalka koowaad ee looga hortago da'da 1.5 bilood. Marka lagu daro tallaalka, antihistamines waxaa loo maamulaa bakayle. Haddii xayawaanku wali xanuunsan yahay, markaa si fudud ayaa loo qafaashaa si uusan infekshanka u sii faafin daaqii oo dhan. Shakhsiyaadka si toos ah ula xiriiraya bukaanada waxaa loo diraa karantiil.
Waa muhiim! Baahida loo qabo isticmaalka mukhaadaraadka waa in lala socdo dhakhtarka xoolaha, kaasoo go'aamin doona jadwalka isticmaalka oo dooro qiyaasta saxda ah.
Xayawaan caafimaad leh waa inuu lahaadaa nafaqo haboon, sidaa daraadeed waxaa lagama maarmaan ah in la xusho cunnooyinka bakaylaha, iyada oo la tixgelinayo talooyinka khubarada iyo sifooyinka dhirta aagga.
Wakiillo ka socda dalxiisku waa kuwo aan la qabin oo keliya xaaladaha cimilada iyo xaaladaha xabsiyada, laakiin sidoo kale cunto. Silver Poltava waxuu cunaa dalagyada miraha, miraha, miraha, khudaarta, cawska iyo cawska iyo cawska qallalan. Markaad quudinta, tixgeli talooyinka soo socda:
cawska cusub ama qallalan (hay) waa inay joogaan cuntada maalin walba - qaybtaan cuntada ayaa ka caawisa geedi socodka dheefshiidka cuntooyinka adag;
ma badin kartid bakeyleyda siriyaalka - waxay yareysaa bacriminta, waxay horseedaa cayilka iyo waxqabadka hoos u dhaca;
lafdhabarta dhirta yar yar iyo lafdhabarta ee dhirta loogu talagalay in la gooyo ilkaha bakaylaha waa in ay ku jiraan qafis.
Xilliga jiilaalka, si loo hagaajiyo tayada xayawaanka, quudinta leh digirta caleenta laga soo koobay khudradda la kariyey iyo cuntada lafaha, taas oo lagu isticmaalo dhismooyinka vitamin-macdanaha lagu daro, ayaa loo isticmaalaa.
Waxaan kugula talineynaa inaad ogaato in ay suurtagal tahay in la siiyo digir, nettle, hadhuudh, dacar, canab, iyo cherry laamood si ay bakaylaha.
Alaab walbana kuma habboona bakaylaha, iyo waliba dhammaan qiyaasaha cuntooyinka la oggol yahay ayaa lagu dabaqi karaa marka la quudinayo. Waa kuwan khaladaadka ugu muhiimsan iyo xaddidaadyada quudinta:
Waxyaabaha ay ka kooban tahay borotiinka waa lagama maarmaan, laakiin waa inay noqdaan mid ka mid ah dhirta, sidaas darteed waa ka mamnuuc in la siiyo "jelly";
maaha dhammaan khudradda ay faa'iido u tahay xayawaankan - liiska mamnuucidda barafka, baradhada cas, khudaarta qoysaska nightshade (yaanyo iyo ukunta), qajaarka, basasha, dabocase miiska;
miro khafiif ah sida avocados, mangoes, kiwis, iwm. - Iyaga oo loo adeegsanayo quudinta ayaa xitaa aan caqli-gal ahayn oo ka imanaya aragtida maaliyadeed;
Qaar ka mid ah firileyda waxay waxyeeleyn karaan caafimaadka, oo aan la iibin - kuwan waxaa ka mid ah masago, bariis, galley, marka ay caloosha qabsadaan isla markaana kordhiyaan qadarka dheecaanka xuubka ah;
digir cagaaran, digirta digirta ah iyo kuwa diyaarka ah oo diyaar u ah maaha cunto bakayle;
marka la cuno, waxaa habboon in la kala saaro waxa u muuqda sidelong, sababtoo ah dhammaan dhirta jarida waxay ku habboon tahay quudinta xayawaanka - dhirta sida caarada, celandine, cawska-hurda iyo kuwo kale oo keeni kara sumowga waxay u keeni kartaa quudinta;
hadhaaga miiska, khaasatan macmacaanka, gebi ahaan maaha mid u qalma in la siiyo bakayle.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay cilmibaarista, indhaha ee bakaylaha ayaa kala soocaya oo keliya laba midab - casaan iyo cagaar.
Noocyada taranta xayawaanka yaryar
Qaan-gaarnimada jinsiga ah ee haweenkan ka mid ahi waxay timaaddaa da'da qiyaastii 4 bilood, ka dib marka ay gaarto iyada oo ay ku fadhido qafiska ragga. Ka hor intaadan ladilin waxaad u baahan tahay inaad ogaato xaqiiqooyinka bayoolojiga ee soo socda nolosha nolosha bakayle:
Muddada hargabku waa 5 cisho, 8 cisho kadibna waa la soo celiyaa - tani waxay sabab u tahay bacriminta sare ee bakaylaha;
waxaa lagula talinayaa in hal ragga loo qoondeeyo 5-6 dumar dhawr maalmood;
Doogga yar ee Poltava ee lacagta ah wuxuu soo saari karaa illaa shan shinbirood sanadkiiba, iyo tirada bakaylaha ee mid kasta oo ka mid ah waxay noqon kartaa 8-12 qof;
1-2 maalmood kaddib, gabadhu waxay diyaar u tahay mishiinka xiga;
Ilmuhu waa madow markay dhalayaan, laakiin dhowr toddobaad gudahood waxay helayaan midabkooda lacagta.
Uurka uurku wuxuu soconayaa ilaa hal bil, ka dib marka ilmuhu dhashaan ilaa 75 g. Dhibcaha ayaa si dhaqso ah u kordhaaya taageerada joogtada ah ee haweenka, taas oo horumarisay dareenka hooyada - waxay leedahay awooda quudinta wanaagsan ee dabiiciga ah. 4-6 toddobaadkii nolosha, dhallinyaradu way ka soocanyihiin hooyada oo waxay bilaabaan nolol madaxbannaan, si tartiib tartiib ah ayaa loo isticmaalaa xaaladaha xabsiga iyo cuntooyinka bakaylka qaangaarka ah.
Poltava silver waa nooc dhab ah oo u gaar ah, aan qabyo ahayn, fecundity, tayada hilibka iyo maqaarka waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee caan ku ah beeralayda. Iyo iska caabin ah qabow ee this bakeyle this ka dhigaysaa suurtagal ah in ay u koraan dalka ku dhowaad meel kasta.
Video: Laga soo bilaabo taranka dahabka Poltava lacag